Fijoroana vavolombelona avy amin’ireo mpamaky: Ny antony anohanako ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Global Voices, toerana ipetrahan'ny fanantenana
Voadika ny 09 Jona 2019 14:58 GMT
Andro vitsy lasa izay, nisy zanak'olom-piray tampo efa tsy tafaresaka ela tamiko nilaza hoe te-hanao fanomezana ho an'ny Global Voices. 26 taona izy ary mianatra asa aminà banky iray any ivelan'ny tanànan'i Parisy. Mifankahazo tsara izahay na dia tsy mifanerasera matetika aza. Izao no fotoana voalohany nanononany ny Global Voices tamiko ka nahatonga ahy nanontany azy ny antony tiany hanaovana izany. Toy izao no nambarany (namboariko kely ny avy amin'ny fifampiresahanay):
Mpamaky tsindraindray ny Global Voices aho, avy ao amin'ny fahana Facebook-ko ny ankamaroany.Taorian'ny 13 Novambra, sy ilay fanafihana tao Parisy, latsaka tambanin'ny masoko ary novakiako ireo lahatsorratra fandalinana marobe momba ilay tranga, saingy nisy zavatra tsy nandeha tamin'ny laoniny tany anatin'ny resaka rehetra tany. Avy eo vao mainka lasa adala izao tontolo izao. Ilay mpirotsaka ho filoha ary sangany avy amin'ìny Repoblikàna izao miantso ny handraràna ny silamo tsy hiditra any Etazonia, sambany ny hery farany havanana ao Frantsa nandrombaka ireo fifidianam-paritra farany teo ary nasehon'ireo fitsampankevitra tao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana fa hanome lamosina ny mpifindra monina ny ankamaroany manerana ilay tanibe, dia ireo mpifindra monina tandindonindoza any amin'ny firenena niaviany ary mikatsaka fialofana.
Mampahatahotra ahy ny hiafaran'izao tontolo izao. Ny toerana ipetrahan'ny fanantenako tato anatin'ny andro vitsivitsy dia ny namakiako ireo tranonkala toy ny Global Voices izay afaka manome fomba fijery hafa miaraka amin'ireo tatitra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao miala amin'ny hadalan'ireo mpampahalala vaovao mahazatra amin'izao fotoana izao. Tsy haiko io karazana fomba fitantaràna io raha toa ho afaka hahomby amin'ny fampitsaharana ireo kabary mampifanohitra amin'izao fotoana izao, saingy azoko antoka ny hoe ny Global Voices dia miezaka ny manome fomba famaky iray hafa momba ity tontolo ity miaraka amin'ireo tatitra erantany. Afaka ny hitondra fiovàna izany, na tsia koa. Saingy mendrika ny ho andramana ary tiako ny hanohana an'izany.